အိမ် - တိုက်အသစ်ငှါးမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: တိုက်အသစ်ငှါးမည်
တိုက်အသစ်ငှားမည်(35သိန်း) 25x60 သုံးထပ်တိုက် တောင်ဥက္ကလာ သုမင်္ဂလာလမ်း Myanmar Home Real. Estate. Co..Ltd Viver , ...09250029352 / 09956042880 Email ... [email protected] http://www.iMyanmarhouse.com/8416140 Facebook Page link..,.https://www.facebook.com/%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%94-583679851967781/ အိမ်ပိုင်ရှင်များတိုက်ရိုက်အပ်နှံနိုင်ပါတယ် အရောင်း/အငှား အမြန်ဆုံးထွက်အောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်